Home | nepalpatranews.com
Thursday, 19 September, 2019 | २०७६ आश्विन २ गते , विहीवार
बैदिक कालमा कृषिको सम्मान र आजको अबस्था
२०७६ जेष्ठ २० गते , सोमवार प्रकाशित
जीवनको आधारभूत आवश्यकता अन्न र पानी हो । घर बस्त्र आदि त्यसपछिका आवश्यकता हुन् । अन्न नै प्रथम कुरा हो । अन्न कुनै कारखानमा उत्पन्न हुदैन र गर्न सकिदैन । यो धरतीको उपज हो । कृषि भनेको पनि मूलतः यही अन्न उत्पादनको ब्यबस्था हो ।समुन्नत कृषिले नै भरपेट अन्नको प्रत्याभूति दिन्छ । हाम्रा पुराना शास्त्रहरु पनि अन्न प्रतिष्ठाका कुराहरुले भरिएका छन् । ऐतरेय उपनिषदको सम्वन्ध ऋग्बेदसँग छ । तिनमा अन्न र आयुको सम्वन्धको कुरा छ । अन्न नभइकन आयु हुदैन । त्यसैले अन्नलाई अन्नायु पनि भनिएको छ । अन्न नभइकन जीवन चल्न सक्तैन । अन्न कृषि कर्मसँग सम्बन्धित कुरा हो । तर्सथ कृषि बिना अन्न उत्पन्न हुन सक्तैन ।त्यसैले कृषिको सम्बृद्धि अनिबार्य कुरा त्यतिबेलैदेखि रहँदै आएको छ ।
ऋग्बेदमा कृषि कार्यहरुको भरीपूर्ण उल्लेख रहेको पाइन्छ । ऋग्बेदका देबता पनि किसानलाई नै बताइएको छ । यसबाट समेत मान्न सकिन्छ कि ऋग्बैदिक समाजमा कृषिको उच्च प्रतिष्ठा थियो । कृषि सम्मानको कर्म थियो । ऋग्बैदिक ऋषिहरुले आफ्ना कबितामा आफ्ना देवहरुलाई पनि कृषि कार्य गर्दै गरेको देखेका र तिनका बारेमा महिमा गाएका छन् । बैदिक समाजमा कृषि नगर्ने कोही पनि मानिस सम्मानित छैनन् । अश्विनी कुमारहरुलाई श्रेष्ठ बैद्य बताइएको छ । तर तिनले पनि हलो जोत्दछन् । इन्द्रले पनि हलो जोत्दछन् । एउटा देबता छन् क्षेत्रपति । उनले कृषि कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँदछन् । बषर्ातका देवता पनि कृषिसँगै सम्वन्धित छन् ।
बैदिक समाजमा बर्ण जातिको बिभाजन भएको देखिदैन ।गण समूह आदि थिए । गणका नेता या आस्थाका केन्द्रलाई गणपति भनिने गर्दथ्यो । गणभन्दा ठूलो सामाजिक इकाई थियो जन । ऋग्बेदमा पाँच मूख्य जन समूहको बिभिन्न चर्चा गरिएको छ । तिनलाई पञ्चजना, पाञ्चजन्य आदि नामले पुकारिएको छ । त्यस्ता सबै पाँच जन समूह कृषिसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले तिनलाई 'पञ्चकष्टयाः' पनि भनिएको छ । यसरी त्यतिबेला कृषिलाई अन्नदायिनी भनेर अति सम्मानित स्थान मिलेको थियो ।
उत्तर बैदिक कालको साहित्यमा पनि अन्नको ब्यापक महिमा पाइन्छ । अन्न पृथ्वीदेखि आकाशसम्म प्रतिष्ठित छ । तेतरीय उपनिषद्मा भनिएको छ : 'सबै प्राणी अन्नबाटै पैदा हुन्छन्, अन्नबाटै जीवित रहन्छन् र अन्नमै फर्किन्छन् ।'अन्नं हि भूतानां जेष्ठम्'-अन्न सबैभन्दा बरिष्ठ हो । यो सर्बोपरी औषधी - 'सर्बरेषधम्' हो । त्यसै उपनिषदमा भनिएको छ : 'अन्नं न निन्द्यात्' - अन्नको निन्दा नगर्नु ! 'तत् ब्रतम्' - यो ब्रत हो । प्राण अन्न हो । शरीर अन्नको भोक्ता हो । शरीरमा प्राण छ, अन्न प्राण हो। अन्नमा अन्न नै प्रतिष्ठित भइरहेको छ । ऋषिको उदात्त घोषणा के छ भने जसले यो कुरा बुझदछन् ती अन्न सम्पन्न र यशस्वी हुन्छन् । अन्न प्राप्ति आवश्यक छ । अन्न अपरिहार्यताको मनन अझ बढी आवश्यक छ । अन्नको आदर प्राचीन भावना हो ।यसै प्रसंगमा अगाडि भनिएको छ : 'अन्नं न परिचक्षीत' - अन्नको अपहेलना नगर ।यो ब्रत संकल्प हो । जल अन्न हो ।अन्न जल ज्योति हो । ज्योति-तेजले अन्न लिन्छ । अन्नमा अन्न प्रतिष्ठित छ -'अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितम्' । अगाडि थप के आग्रह गरिएको छ भने - 'अन्नं बहुकुर्वीत' - बहुबिध अन्न पैदा गर । यो ब्रत हो । पृथ्वी अन्न हो, आकाश पनि अन्न हो । पृथ्वीमा आकाश प्रतिष्ठित छ । अन्नमा अन्नको प्रतिष्ठा छ । पृथ्वी, जल, आकाश र तेजलाई अन्न भनिनु अमिल्दो कुरा लाग्न सक्तछ । तर ऋषि बेदान्तको मनोभूमिमा अन्न आवश्यकतामाथि यो टिप्पणी गरिरहेका छन् ।अन्न उत्पादनको कर्म खेतीपाती हो ।किसानी हो । कुनै कारखानामा अन्न उत्पादन हुने गर्दैन ।
तर आज खेतीपाती सर्बनाशतर्फ अभिमुख छ । बैदिक कालको सम्मानित कृषि परम्परा नै ग्रामीण उपमामा आज पनि कतिपय स्थानमा सुन्न पाइन्छ ।उत्तम खेती मध्यम ब्यापार, निषिद्ध चाकरी(कर्मचारी) भन्ने कुरा बैदिक कालकै कुरा हो ।त्यतिबेला कृषिलाई यसरी सम्मानपूर्ण स्थान दिइएको थियो । तर आज कृषि कर्मलाई त्यस्तो सम्मान र आकर्षण नदिइएकोले गर्दा किसानहरुले नै कृषि कर्म परित्याग गर्ने स्थिति बनेको देखिदैछ । खाद्य सुरक्षा खतरामा छ । यद्यपि आज कृषि बिज्ञान र यस सम्वन्धि जानकारी पनि बढेको छ । मौसमको पूर्बानुमानको शक्ति पनि बढेको छ । यी सबै कुराहरु हुँदाहुदै पनि आज कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । किसान ऋणमा डुबेका छन् । उनीहरुको लगानी उठिरहेको छैन ।
अझ आज भारत लगायत कतिपय देशमा त किसानहरुले आत्महत्यासम्म पनि गरिरहेका छन् । यी सब कुराले प्रष्ट पार्दछ कि आज कृषि पहिलो प्राथमिकतामा छैन । अझ प्रष्टरुपमा भन्ने नै हो भने 'औद्योगिक-ब्यापारिक क्षेत्रमा सुबिधा, कृषि क्षेत्रमा द्विबिधा' जस्तो स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले कृषिको चौतर्फी बिकासका लागि जल, जमिन, जंगल र जनशक्ति लगायत किसान र कृषि समस्यासँग सम्वन्धित समस्याको चाडोभन्दा चाडो गम्भीर उपचार आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । टालेटुले खालका ब्यवसायिक खेती गर्ने कुरा गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन । किसान र कृषिमा ब्यापक र आमूल सुधार बिना देशको राष्ट्रिय बजार अभिबृद्धि हुदैन र त्यसो नभइकन राष्ट्रिय औद्योगिकरणले पनि सही दिशा र गति प्राप्त गर्न सक्तैन । यो आजसम्मको अनुभवको यथार्थ निचोड हो ।
पाँचतारा साकोसको १२औं साधारणसभा सम्पन्न, पाठकको अध्यक्षतामा नयाँ समिति
“बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु निर्धक्क भएर काम गर्नुस्” : कँडेल
कृष्णनगर इलाका प्रहरी कार्यालयको कार्य सम्पादन मूल्यांकन
कृषिमा आधुनिकीकरण गरी सदस्यको जीवनस्तर उकास्न लागिपर्छौं
सन्दर्भ व्याजदरको विरुद्धमा सहकारीकर्मीले बुझाए महासंघलाई ज्ञापन
मार्क्सबाद र एशियाली दर्शन - दुइ दिने बिश्व सम्मेलन सम्पन्न
शिवम दुग्ध उत्पादन केन्द्र जंगलमा परिणत भएको अबस्थामा
सरकार फोर्स मर्जरको पक्षमा छैन : मन्त्री अर्याल
बिन्धवासिनीको सदस्य विस्तारित एवं समुह संयोजक भेला सम्पन्न
अमेरिकाले जमिन मुनि किन लुकाउँछ तेल ?
बिहिबारसम्म लगातार वर्षा हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह
चीनद्वारा आज आणबिक सुरक्षा श्वेतपत्र जारी
सकियो नाडा अटो सो, ८१ हजारले अवलोकन गरे
कलम चलाऊनु हुन्छ?
आईतवार देखि शुक्रबार
१०:०० देखि ७:००
३५८ / ०७३ / ७४
हामीलाई लाइक गर्नुहोस्
हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्
प्रधान सम्पादकः लोकनारायण सुवेदी
सम्पादक: माधवकुमार खड्का
ठेगानाः महादेवस्थान मार्ग, कोटेश्वर, काठमाण्डौ,
ईमेलः nepalpatranews@gmail.com / news@nepalpatranews.com
नेपालपत्र टिभि हेर्नुहोस्
Copyright © nepalpatranews.com, All rights reserved. Powered by : Al Mawadah IT